Sida loo doorto taleefanka gacanta: tilmaamaha iyo astaamaha | Ragga Stylish
Sida loo doorto taleefanka gacanta
Markaan iibsaneyno mobilo cusub, waa inaannaan fiirin oo keliya qiimaha iyo moodeelka. Waxaa jira doorsoomayaal badan oo ka dhigaya taleefanka gacantu inuu si fiican u shaqeeyo isla markaana dammaanad ka qaado inuu daboolayo baahiyahayaga muddada gaaban, dhexe iyo muddada fog. Waxaan dhihi karnaa Android waa hogaamiyaha nidaamyada hawlgalka dhamaan taleefanada aduunka ka shaqeeya. Maaddaama ay tahay nidaam ay soo saare kastaa u hoggaansami karaan, waxaa suuqa ku jira kumannaan iyo kumanaan moodeellada taleefanka gacanta ee Android ah. Maaddaama xulashada taleefanka gacanta uusan sahlaneyn, halkan waxaan ku sharaxeynaa sida loo doorto taleefanka gacanta.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loo doorto taleefanka gacanta si aan khalad u dhicin, kani waa qoraalkaaga.
1 Nidaamka hawlgalka iyo awoodda
2 Sida loo doorto taleefanka gacanta: muhiimadda RAM
3 Tiknoolajiyada UFS iyo cusbooneysiinta
4 Batariga iyo kamarada
5 Sida loo doorto taleefanka gacanta: miisaaniyad
Nidaamka hawlgalka iyo awoodda
Si loo ogaado sida loo doorto taleefanka gacanta ee buuxiya baahiyaheenna iyo dhadhankeenna, waa inaan eegno wixii ka dambeeya warqadda sooca. Waa inaad taqaanaa sida loo dhex maro badda dhexdeeda boosteejooyinka oo u muuqan kara kuwo isku mid ah, laakiin leh astaamo kala duwan. Haddii aan rabno ama aan rabin, haddii aynaan wax ka aqoon tikniyoolajiyadda moobiilka, waxaa fiican inaad u tagto qof garanaya.
Waxaa jira qodobo badan oo muhiim ah markay tahay ogaanshaha sida loo doorto taleefanka gacanta ee nagu habboon. Waxaan ku bilaabaynaa inaan ku sharaxno nidaamka hawlgalka iyo awooda mobilada.
Waxaa loo maleynayaa inaynaan u baahnayn mobiil awood badan. Kaliya sameynta codsiyada sida WhatsApp, emaylka iyo wicitaanka shaqada ayaa ku filan. In kasta oo ay u muuqato inaannaan awood u baahnayn, haddana waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan. Awoodda taleefanka gacanta waxaa sharraxay processor-ka. Waa mid ka mid ah tiirarka aasaasiga ah marka la go'aaminayo waxqabadka uu moobilkeennu yeelan doono sannadaha soo socda. Waa inaanan ilaawin inaan raadineyno moobil ugu yaraan soconaya dhowr sano.
Talada guud waa in lagu sharaddeeyo taleefannadaas moobiilka ee leh processor-ka si xoog leh u shaqeynaya taas oo u oggolaan karta inay sii waddo inay si habboon u shaqeyso muddada fog. Maskaxda ku hay in codsiyada si joogto ah loo cusbooneysiiyo oo ay ku mashquulsan yihiin xusuusta iyo ilaha badan ee taleefanka. Sidaa darteed, waxaan u baahanahay processor kaas oo awoodi doona inuu adkeysto dhammaan cusbooneysiintan oo sii wado inuu si habsami leh u socdo.
Sida loo doorto taleefanka gacanta: muhiimadda RAM
Markii aan ka hadlayno awoodda waxaan sidoo kale tixraacnaa awoodda xusuusta RAM. Tani waa mid ka mid ah walxaha muhiimka ah ee go'aaminta waxqabadka aaladda. In kasta oo ay jiraan dad u malaynaya in inta u dhexeysa 2 iyo 3GB ee RAM-ka ay ku filan tahay, haddana sidaas maahan. Telefoonada gacanta ee leh 8GB RAM ayaa noqon doona moodello heer sare ah oo heer dhexe ah iyo heerka dhexe ayaa ugu badan mobiladaas haysta 4 ilaa 6GB.
Haddii aan rabno in moobilkeennu u gaboobaan si sharaf leh, waxaa habboon in la doorto taleefanka gacanta oo leh xusuus wanaagsan oo RAM ah. Haddii aan dooranno moodooyinkaas oo leh qaddar wanaagsan oo RAM ah waxaan ku yeelan karnaa waxqabad ama wax la aqbali karo dhowr sano gudahood. Sidoo kale waa inaad ogaataa farsamada xusuusta. Waqtigan xaadirka ah heerka DDR4 ayaa loo isticmaalaa, xitaa inta udhaxeysa, sidaa darteed way kufiicantahay in laga fogaado DDR3 hadii aan raadineyno mobile xoogaa raqiis ah.
Tiknoolajiyada UFS iyo cusbooneysiinta
Tikniyoolajiyadda UFS badanaa waa la ilaawaa oo soosaarayaashu waxay bilaabayaan inay ku daraan xusuusta noocan ah aaladaha dhexdhexaadka ah. Aad ayey uga dheereeyaan kuwii aan dhowr sano ka hor tirnay. Waad ku mahadsan tahay booditaankan ku socda xawaaraha akhriska iyo qorista ee tikniyoolajiyadda UFS, waxaan leenahay qodob kala duwan marka laga hadlayo ogaanshaha sida loo doorto taleefanka gacanta.
In kasta oo aan dooneyno in aan la rabin, cusbooneysiintu wax badan ayey muhiim tahay. Waa wax iska caadi ah in isticmaaleyaasha qaarkood cusbooneysiintu noqdaan wax ka dhib badan wanaagga. Si kastaba ha noqotee, ku dhowaad dhammaan cusbooneysiinta waxay leeyihiin xoojin muhiim ah si loo kordhiyo waxqabadka iyo amniga xarunta. Cusboonaysiintaani waa cunsurka kaliya ee naga caawinaya inaan ka dhigno shaqadeena moobiilku mid ka fiican sidii markii aad iibsatay
Maaddaama taleefannadeenna moobiilku ay suuqa la imaanayaan qalab aan la beddeli karin, sida keliya ee wax qabadku u wanaagsanaado muddo ka dib. waa in lagu saxaa iyadoo la cusbooneysiinayo. Haddii taleefankeenna gacanta uu dhibaato ka jiro, kaamirada sidoo kale waa lagu hagaajin karaa ama haddii ay jiraan warar ka imanaya barnaamijyada qaar, waxaas oo dhan waxaa lagu dabaqayaa cusbooneysiinta.
Batariga iyo kamarada
Batarigu waa mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ah marka laga hadlayo ogaanshaha sida loo doorto taleefanka gacanta. Waana in isticmaalka tamarta uu ku xiran yahay arrimo badan. Nooca muuqaalka ee aan kuxirannahay, shaashadda iyo nooca shaashadda, processor-ka, ROM-ga soo saaraha, barnaamijyada aan adeegsanno, iwm. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira sharci aasaasi ah oo khuseeya ku dhowaad dhammaan taleefannada gacanta ee cusub. Way ka fiicantahay inaadan dooran noocyadaas oo haysta wax ka yar 3000 mAh baytariga.
Mobiles-kani si dhib yar uma sii socon doono oo si joogto ah ayaa loogu xidhayaa shabakadda korantada si looga qaado. Laguma talin doono inaad doorato nooc kasta oo taleefan gacmeed ah oo ka yar batteriga 3300 Mah. Ha isku khaldin waafaqsanaanta muddada-gaaban. Haddii baytarigu maalin sii socdo markaan iibsanno, wuxuu ku dhammaan doonaa bartamaha galabtii dhawr sano ka dib. Markasta oo biliyado badan aad heysato bilowga ayaa ka sii fiican.
Dadka kale waxay ku mashquulsan yihiin megapixels-ka kamaradda markay iibsanayaan taleefanka gacanta. Uma baahnid inaad ku mashquusho. Terminalka ugu fiican marka la eego waxqabadka kamaradda waa iPhone XR iyo Google Pixel 3. Waxaa jira qaar 48 dareemayaal megapixel ah oo ah soojeedin xiiso leh si loo helo nal badan oo tayo fiican. Sidoo kale uma baahnin inaan doorano mobiil heer sare ah si aan u helno kaamirooyin wanaagsan.
Sida loo doorto taleefanka gacanta: miisaaniyad
Ugu dambeyntiina, waa inaannaan meesha ka saarin miisaaniyadda aan haysanno midkoodna. Talo soo jeedintu waa in lagu sharaddeeyo mobiladaas aan iibsan karno oo aan ku gaari karno, iyada oo la tixgelinayo dhammaan sifooyinka aan falanqeynay. Haddii uu jiro mobeel dhan 170 euro oo leh astaamo aad uga wanaagsan kan 150 euro, waxaa ugu wanaagsan in la doorto midka ugu qaalisan. Waqtiga fog kuwa 20 ka euro ee faraqa badan ayaa wax badan naga caawin kara.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto sida loo doorto taleefanka gacanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Sida loo doorto taleefanka gacanta
Xeerarka Kubadda Cagta
Tattoo yar oo loogu talagalay ragga